Kuwedzera: Kuvandudza Kukanganisa kweSocial Media Ads yako | Martech Zone
China, July 12, 2012 Svondo, October 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Nekufamba kwenguva, vashambadziri vakagadzira yakasarudzika uye nzira itsva dzekugadzira zvinotungamira. Asi kushambadzira kwepamhepo kunoramba kuchine chinzvimbo chakasimba mumusika. Kudzidza kwaAppsavvy, "Social Activity Index - Kuyera Kubudirira kweSocial Advertising" kwakaitwa muna Kubvumbi 2011, kunoratidza kuti kushambadzira kwakabatanidzwa mumitambo yekudyidzana inopararira pamitambo yemagariro, kunyorera, uye mawebhusaiti anoshanda zvakapetwa ka11 pane kutsvagwa kwakabhadharwa, uye kaviri inoshanda seyakapfuma midhiya.
Tsika dzepaInternet kushambadzira, mune vezvenhau kana chero kumwe kunhu, iwo mabhokisi kana mabhendi kushambadzira. Kunyange ichishanda pakutanga, kushambadzira kwakadaro ikozvino kunogadzira yakaderera maCPM uye kwakadzikira mukushanda pamusoro pemakore. Iyo 2010 Harris Inopindirana sarudzo inoratidza kuti makumi mana neshanu muzana evashandisi veinternet vanofuratira mabhana emashambadziro. Izvi zvinokonzerwa nekuda kwekuti vashandisi vezvemagariro pasocial network vane nguva shoma (uye span yekucherechedza!) Yekuzvipira kushambadziro, iyo yavanofunga sekukanganisa.
Ndokuda kuyedza kuve nechokwadi chekuti vezvenhau kushambadzira vanounza ine hutano ROI ine nzira nyowani yeku online kushambadzira.
Kuvaraidza neAppsavvy chinhu chinokanganisa chiitiko-chakashambadzira tekinoroji chikuva iyo inobvumidza vashambadzi kuvhura mikana mitsva yekushambadzira pane kungotenga nzvimbo mune iripo hesera.
Iyo Adtivity chikuva inoita kuti chokwadi vashandisi varambe vachigamuchira kune ayo kushambadzira. Iyo inoteedzera maitiro emushandisi uye kuendesa kushambadzira kana mushandisi achitora zororo pakati pechiitiko. Iyo zvakare inovimbisa kuti kushambadzira inosanganisirwa kune yakazara chiitiko. Mune mamwe mazwi, inoratidza kushambadzira kwakakodzera, inoita shuwa kuti kushambadzira kune chekuita nebasa rinodiwa nemushandisi, uye kuyedza kusakanganisa mushandisi.
Mushambadzi anowana nzwisiso mukubudirira kweshambadziro kuburikidza nemameturu emakampeni, analytics uye kutsvagisa kwakapihwa neAdtivity.
Kuti uwane rumwe ruzivo, mitengo, kana kutanga kutsikisa kushambadza uchishandisa Adtivity, ndapota shanya: http://appssavvy.com/#contact.
Tags: KunakaAppSavvymishandirapamwemetricsmaitiro emushandisi
Simbisa Yako Facebook Peji neNorth Social
Jul 14, 2012 pa 3: 03 AM
Yup. Zvinhu zviri kuramba zvichichinja neSM uye zvakanaka kuti iwe unokwanisa kuuya nemazano anobatsira kuti uwane shanduko uye kusimudzira kushanda kweSMA.